4 Nzira: Sei Yakakura Dhata otomatiki iri Kuchinja Data Sainzi? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
4 Nzira: Yakakura Sei Dhata Yekushandisa iri Kuchinja Dhata Sayenzi?
chakagadzirwa njere machine learning hombe data otomatiki kubuda kwe Big Data yaunza shanduko huru mudhijitari mamiriro uye mashandiro esangano. Neakawedzera analytics kusimuka kweBig Data matambudziko akabudirira kurerutswa nawo. Nekuuya kwemaitiro matsva mumusika, matekinoroji ari kuwedzera kunatsiridzwa. kushandisa michina yeBig Data ndiyo tekinoroji inonyanya kunetsa iyo iri kuchinja zvachose kutonga. Chinhu chikuru cheBig Data chiri mukutsvaga mapateni ayo aine mamwe maitiro ekuratidzira. Izvo zvinobva zvagadziriswa nema automated maitiro ayo anobatsira mukucherechedzwa kweimwe yakatarwa 'data maficha'. Aya maficha anobva abatsira mukuvaka kufungidzira kwekufungisisa kwedhatabhesi.
Chirevo chevatsvakurudzi vakasiyana:
Sezvakataurwa nevatsvakurudzi vanobva kuMIT Big Data Analytics bvunzo yakaitwa. Izvo zvakaitwa nekubvisa chimiro chevanhu kubva panguva yayo. Yekutanga yerudzi rwayo yakadaidzwa Dhata Sayenzi Machine yakaiswa mukuita mumakwikwi akati wandei eData Sayenzi apo ino michina yainyatsoita zvirinani kupfuura vakwikwidzi vayo vevanhu. Iyo chaiyo nhanho yakawanikwa mumuedzo yaive 96%. Zvinosetsa, uko vanhu vakatora nguva yakawanda chaizvo mwedzi yekumisikidza yavo yekufanotaura algorithms, michina yakangoita zvakafanana maitiro mumaawa mashoma. Tsvagurudzo iyi inonyanya kutarisa mukugadzirisa iyo Big Data Analysis iyo yaive yekugadzirira yakatarwa dhata uye kuzivikanwa kwematambudziko anogona kugadziriswa neongororo.
Unofarira Big Data? Bata nhasi.
Ndeapi mabhenefiti eBig Data Yekushandisa?
Kubva ku kushandisa michina YeBig Data Kuongorora, huwandu hwakawanda hwemasangano hwakawana mabhenefiti. Zvinoenderana nehunyanzvi hwaiswa chero huwandu hweBig Data hunogona kugadziriswa, kuongororwa uye kunzwisiswa mukati memavhiki mashoma. Muzvinhu zvese izvi, otomatiki yakapa mamwe mabhenefiti senge kudzikiswa kwemari yekushandisa, kugadzirisa kugona kushanda, kuvandudza ma-module-ekuzvishandira, uye kuwedzera kukura kwe Big Data matekinoroji. Semuenzaniso mu e-commerce bhizinesi, inogona kushanda senhamba yekuzivisa iri kuwedzera pamatafura edata. Kunyangwe kutsvaga maficha akabatanidza tsika, zvinotarisa kune data rezvikamu.
Ndeipi basa rinoitwa otomatiki Kutamba?
Musangano Wepasi Pose weData Sayenzi neAdvanced Analytics akaitiswa kuInstitute of Electrical and Electronics Injiniya (IEEE) umo modhi iyi yaive yakatariswa. Kucherekedzwa uko kwakaitwa kuburikidza nenguva-kusiyanisa dhata. Izvi zvakafungidzirwa kucherechedza zvichashandiswa kufembera mune ramangwana. Tichifunga izvi zvakanyanya, iro basa rinofanirwa kuitiswa neomuchina zvakanyanya zvinotsamira pazvinhu zvina zvinotevera:
1. Kudzidza kweNguva-Kushatisa Huru Dhata:
Chidzidzo chakaitiswa chinofanirwa kunge chiri kushanda pachirongwa chekutanga chekutsvaga chero vhoriyamu yedata kwenguva yakati rebei. Kupatsanurwa kweAnalytics muzvikamu zvakasiyana kunojekesa nzira yekutenderera. Izvi zvikamu zviri kunyora dhata, kupatsanurwa kwayo zvichienderana nenguva dzenguva dzakakodzera etc. Kunyangwe kuzivikanwa kwemaficha e data kunoitwa mukati mayo.
2. Basa muKugadzirira kweData:
For Kufanotaura Ongororo, iyo nguva inotorwa inoderedzwa chaizvo nemuchina wekushandisa. Sekureva kweData Masayendisiti ari kushanda pane izvi maitiro, akaomarara akapokana. Nekudaro inoda mutauro wakasimba unoita kuti kuzivikanwa kwedambudziko rekufanotaura kuve nyore uye kuenzanisa maitiro ekuongorora. Zvakare, chimiro chakatemerwa chinodikanwa icho chinogona kushanda otomatiki neakasiyana maratidziro ezvienzanidzo zviito zvekumisikidza uye kunyora mazita.
3.Kutsvaga Kufanotaura Zvimiro uye uchizviratidza:
Iyo inomiririra yedhata ndiyo yakakosha basa rinotambirwa neotomation mune inoyereka fomati. Kusvikira kugoneswa kwevanoongorora, inogona kushanda sekukwakuka kukuru kunobatsira mukutsvaga matambudziko makuru ekufanotaura mune yunifomu fomati. Izvi zvinobatsira mukugovana kwayo uye kuongorora. Nekuda kweizvi, pachave nekuwedzera kwekubatana pakati peData Analysts uye nyanzvi yedomain. Kunyangwe pakutsanangudza matambudziko, iyo nyanzvi ichakwanisa kutungamira uye nekuunza kushandisa mutauro uyo unoshandiswa pakuongorora mota kufanofungidzirwa. Kunyangwe pachave nekuwedzera kwekururamisa mukuita.
4. Yekuzvishandira-Modhi inogadzirwa:
Kune wese muridzi webhizinesi, izvi chaizvo zvine chinongedzo chakanangana nekuvhurika kweiyo otomatiki Analytics. Iko kune yakadzika nzwisiso yedata mune chaiyo nguva nekuda kwekukura kwesimba kweCloud Computing. Inotungamira pakuderedzwa kwemutengo nekuita nyore kuwana kweyakajairika Bhizinesi Njere uye Cognitive Computing Analytics. Rutsigiro rwekuronga rwuripo muchimiro cheData Lakes uye mapuratifomu ekugadzirira data zvakare inobata mafambiro ekuzvishandira. Zvakadaro, kushandisa otomatiki data kunofanirwa kuitwa chete kuburikidza nemapuratifomu akachengeteka. Kana iyo marongero akasimbiswa nekushandisa Semantic data kugadzirisa zvichabatsira hutongi panguva yekuwiriranisa data nebhizinesi-yakakosha ruzivo. Iko kuchengetedzeka kunofanirwa kutarisisa kuvhara maficha ehuchokwadi, kutonga, kuongorora, uye kuvaka.
Munzira yekuvandudza Data Science munguva iri kuuya, otomatiki ye Big data Analytics idanho hombe. Zvakanyatso fambisa mabhizinesi mukusimudzira zvinhu zvakawanda pasina kuenda munzvimbo dzakaoma sezvo iri modhi yekuzvishandira. Iyo Big Data yakave yakanyatso shandiswa uye inodhura-inoshanda. Kune zvakanyanya, zvinotobatsira iyo Data Scientist kuti itarise pahunyanzvi hwavo hwakadzama kunyangwe kupinda mukuita zvinopedza nguva zvekuongorora data.
Kutsvaga data masayendisiti ako anotevera makuru chirongwa Bata nhasi.